Mpikanto Mampiranty An-tsary Ny Hanin’Ireo Iraniana Te-Hody An-Tanindrazana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Mey 2014 10:25 GMT
Nisongadina nandritra ny Fetiben'ny Saripika Mahadona Fo notontosaina tao Toronto ny fampirantiana nataon'i Saman Aghvami's “I'm Not There” (Tsy any aho).
Iraniana marobe monina any ivelany (am-pielezana) no manina ny tanindrazany izay tsy azony hodiana noho ny tahotry ny fanenjehana. Toa toy ny nilaza anefa ny fanehoan-kevitra nataon'ny filoha Hassan Rouhani vao haingana fa afaka mody tsy amin-tahotra ny ho voasazy ireo Iraniana any ivelany, saingy mbola zava-doza hoan'ny maro ny fiverenana ao Iran. Ka ny hany azon'izy ireo atao dia ny manina ny firenena niaviany.
Niezaka naneho izany fihetseham-po izany taminy alalan'ny fampiratiana an-tsary antsoina hoe I'm Not There” (“Tsy any aho”) nandritra ny Fetiben'ny “Contact Photography” tao Toronto ilay mpaka sary Iraniana-Kanadiana Saman Aghvami.
“Nanontany aho, Aiza no tianao aleha raha manana adiny roa handehandehanana ao Iran ianao?’. Ireo sary ireo no valin-tenin'izy ireo”, hoy i Aghvami tamina resadresaka niarahana tamin'ny Global Voices.
Mpaka sary mpanao gazety ao amin'ny Sampam-pampahalalam-baovaon'ny Mpianatra Iraniana (Iranian Student News Agency na ISNA) i Aghvami talohan'ny nifindrany tany Kanada, ary naka sary ireo Iraniana tao amin'ny trano fonenan'izy ireo ankehitriny sy nampiranty izany sary izany tany amin'ny toerana isan-karazany izay miteraka fahatsiarovana ny taloha eo amin'ireo olona voakasik'izany, izay ahitana mpikatroka, mpanakanto, vondrona vitsy an'isa, mpanao gazety sy mpanohitra. Nahasarika an'i Aghvami ny lohahevitra momba ny fitsoaha-ponenana sy ny hanina ny tany niaviana “tsy azo aleha” noho ny zava-niainany manokana amin'ny maha-Iraniana azy monina ao Kanada
Misy naoty vita sora-tanana isaky ny zavatra iray tafiditra ho fanazavana ny toerana iray any Iran mahamanina azy ireo. Saripikan'i Semco Salehi. Nahazoana alalana.
Sary iray mitondra ny lohateny hoe “Rouzbeh: Mpanatontosa sarimihetsika”, naka sary an-tsaina ny fahatsiarovany ny Bazary ao Tehran. “Nilaza taminy izy fa nataony ho ohatra ilazany ity tontolo ity sy ny fiainana ny Bazary”,hoy ny fanazavan'i Aghvami, izay nanampy fanamarihana an-tsora-tanana isaky ny sary mba hanazavana ny safidin'izy ireo.
Nanjary lasa adihevitra mafana ny mikasika ny zon'ireo Iraniana mpitsoa-ponenana hiverina an-tanindrazana hatramin'ny nangatahan'ny filoha Rouhani tamin'ny Minisitry ny Fitsikilovana sy ny Raharaham-bahiny mba hamela ny fiverenan'ireo Iraniana any ivelany hody an-tanindrazana. Ho valin'izany, nandrisika ireo Iraniana monina ivelan'i Iran ny lefitry ny minisitry ny Raharaham-bahiny misahana ny raharahan'ny Kaonsily, Parlemantera ary ireo Iraniana nitsoa-ponenana, Hassan Qashqavi mba handefa mailaka any amin'ny Minisiteran'ny Raharaham-bahiny ary hanontany ny momba ny fiverenan'izy ireo ao amin'ny iranianaffairs@mfa.gov.irNa dia izany aza, nanao fanambarana izay niteraka ahiahy teo amin'ireo Iraniana monina any ivelany ny Lehiben'ny Fampanoavana Gholamhossein Mohseni Ejehi. Nandritra ny valan-dresaka hoan'ny mpanao gazety tamin'ny volana Jolay 2013, nilaza izy fa afaka mody ao Iran ny rehetra, saingy tsy ny rehetra no afaka mandao ny firenena. Tamin'ny 12 Mey, nilaza ny tatitra tao amin'ny gazety Shargh fa maro tamin'ireo fangatahana nalefa tany amin'ny Minisitera misahana ny raharaham-bahiny no mbola tsy voavaly:
Mbola tsy nahazo valin-teny avy amin'ny minisiteran'ny Fitsikilovana ny 40 isan-jaton'ireo olona nanao fangatahana hiverina an-tanindrazana ao Iran.
Ankoatra izany, niteraka ahiahy teo amin'ireo Iraniana mikasa hiverina am-pilaminana ao amin'ny firenena ny mbola fanagadrana an'ilay Tatsambo Amerikana teo aloha Amir Hekmati.
Noho ny tantara tahaka izao no mahatonga ireo Iraniana matahotra hody na hitsidika an'i Iran: mety iharan-doza tampoka ianao.
Tamin'ny 11 mey, mpanao gazety iraniana-Amerikana Negar Mortazavi nandefa sioka mikasika ny zon'ireo Iraniana hiverina an-tanindrazana, ary vantany tamin'ny kaonty Twitter-n'ny biraon'ny Filoha Rouhani izany. Niteraka sahotaka ilay lahatsoratra raha no-retweeten'ny kaontin'i Rouhani. Nahatonga ny maro naneho-hevitra izany fa politika eken'i Rouhani ny zon'ireo Iraniana hiverina an-tanindrazana izay matahotra fanenjehana, saingy mbola tsy nampiharina tao amin'ny firenena izany.
Zo hiverina any an-tanindrazana lavitry ny tahotra ny fanenjehana. CC: @HassanRouhani
Vao avy ni-retweet ny siokan'i @NegarMortazavi ny ekipam-baovaon'i Hassan Rouhani? Antenaina fa hanao zavatra izy ireo.
Nanomboka tamin'ny volana 1 Mey ka hatramin'ny 24 Mey ny fampiratiana “Im Not There (Tsy Any Aho)” ao amin'ny I.M.A Gallery, ao Toronto.